दशैँमा सार्वजनिक सवारीसाधन: कतिले दिँदैछन् सेवा ? « Deshko News
दशैँमा सार्वजनिक सवारीसाधन: कतिले दिँदैछन् सेवा ?
नेपालीको महान् पर्व बडादशैँको अवसरमा दैनिक छ हजार सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउने भएका छन् ।
दशैँको समयमा धेरै मानिस चाडपर्व मान्न उपत्यका बाहिरिने भएकाले दैनिक छ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधनले सेवा दिन लागेका हुन् । हरेक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक नम्बर प्लेटका सवारीसाधन थप गर्ने गरेपनि यो वर्ष भने कुनै नयाँ बस थप भएको छैन ।